Zvirinani Zvakanakira Blog Zvinyorwa Zvakuite Iwe Anodiwa Mudiwa | Martech Zone
Ok, iro zita rinogona kunge riri kutsausa zvishoma. Asi zvakawana kutarisisa kwako uye zvakakusvitsa iwe kuti ubayare kuenda kune iyo posvo, handizvo here? Izvo zvinonzi linkbait. Hatina kuuya neinopisa blog post zita senge pasina rubatsiro ... isu taishandisa Portent's Zvemukati Idea jenareta.
Vakangwara vanhu pa Portent zvaratidza sei zano rejenareta rakavapo. Icho chishandiso chakakura icho chinoshandisa capitalize pamusoro nzira dzekubatanidza izvo zvakaedzwa uye ndezvechokwadi:
Ego haka - vanhu vanogovana zvemukati kana iwe ukavapa mhere.
Kurwisa hokore - nekuenda kunogumbura, unogona kumutsa kufarira.
Resource chirauro - chishandiso chikuru chinogara chiri chikuru chemukati zano!
Nhau hook - misoro yekufamba-famba inotyaira zvimwe kudzvanya.
Kupokana chirauro - gadzira gakava uye iwe unenge uine hoko inopesana.
Humor hoko - Uri kuverenga iyi positi, handiti?
Mazita akakosha zvakanyanya kune zvako zvemukati. Chandinoda pamusoro peichi chishandiso zvakanyanya ndechekuti hazvingoregi kuita zita, zvinotsanangurawo kuti nei zita racho richishanda se linkbait. Izvo hazvina kukwana nguva dzese, asi zvinonakidza uye zvinouya nezvinotyisa zvemukati mazano akakwana kunyora ichi chinyorwa nezvazvo!
Edza Portent Yemahara Yemukati Idea jenareta
Tags: zvemukati pfungwa jenaretazano jenaretalinkbaitnzira dzekubatanidzabereka
Nikhil Raj ane 7+ makore echiitiko muSEO uye Dhijitari Kushambadzira. Akashanda akananga na Douglas Karr maneja akati wandei emakanzuru uye emunyika vatengi pamwe nekwavo, nyika, uye epasi rese yekutsvaga injini optimization.
CMO Ongororo Mhedzisiro